လူထုလှုပ်ရှားမှု – DVB
ဂရမ်မီဆုရ Patria Y Vida ရက်ပ်သီချင်းနဲ့ ကျူးဘား နွေရာသီတော်လှန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု
ကျုးဘားနိုင်ငံ၊ ဟာဗားနားမြို့တော်ရဲ့ ဇူလိုင်လ နေရောင်အောက်မှာ ထောင်သောင်းချီတဲ့လူငယ်တွေ လမ်းမပေါ်မှာ စုဝေးလာခဲ့ကြတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါနဲ့ အထွေထွေအကျပ်အတည်းတွေကို စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဟာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော် အုပ်စိုးလာတဲ့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရကို အာခံဆန့်ကျင်နေခဲ့ကြတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆိုကြတယ်၊ အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါစေလို့ တညီတညွတ် ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။
အင်တာနက်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေအပြင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်တွေ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ ကျူးဘားမှာ အလုပ်အကိုင် အစာရေစာရှားပါးမှုတွေ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေကို မခံမရပ်နိုင်တော့တဲ့ လူငယ်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လုံးလုံး ဝါဒဖြန့်ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားခဲ့ကြတဲ့ “Homeland or Death” ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် ကြွေးကြော်သံကို အန်တုရင်ဆိုင်လာကြတယ်။ နိုင်ငံတကာ အုံကြွတော်လှန်ရေးရဲ့ သူရဲကောင်း ချေဂွေဗားရားရဲ့ လက်စွဲစကား “Homeland or Death” ကိုယ့်မြေရရင်ရ၊ မရရင် သေခြင်းတရားပဲဆိုတဲ့ အာဇာနည်စစ်ထွက်စကားကို အသုံးချနေတဲ့ ကျူးဘားကွန်မြူနစ်အစိုးရကို ထိပ်တိုက်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ လူငယ် ရက်ပ်သီချင်း “Homeland or Life” - “Patria y Vida” ဆိုတဲ့သီချင်းကို တညီတညွတ် သံပြိုင်ဆိုကြရင်း ဟာဗားနားရဲ့ လမ်းမတွေမှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဟာ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတွေလို တဝုန်းဝုန်း ရိုက်ခတ်နေကြတယ်။
…..My people ask for freedom, no more doctrines
Let's no longer shout homeland or death but homeland and life …..
တို့ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်ရေးကိုတောင်းဆိုနေကြတယ်။ သြဝါဒတွေ လာမပြောနဲ့တော့။ အမိမြေလား၊ သေခြင်းလားလို့ တို့မကြွေးကြော်တော့ဘူး။​ အမိမြေလား ရှင်သန်ခြင်းလား ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ရက်ပ်သီချင်းဟာ ကျူးဘားရဲ့ ခေတ်သစ်တော်လှန်ရေး လူငယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြကြွေးကြော်သံသီချင်းတပုဒ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျူးဘားလူငယ်တွေရဲ့ နွေရာသီတော်လှန်ရေး နှင်းဆီဖြူတော်လှန်ရေးမှာ ကွန်မြူနစ်အစိုးရက တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဒီသီချင်းဟာ နိုင်ငံတော်သီချင်း တပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်ရဲ့ ဝါဒဖြန့်စကားထဲက သေခြင်းတရားထက် သူတို့အနာဂတ် ပြန်လည်ရှင်သန်လာရေးကို တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။
လက်တင်အမေရိကလူငယ်တွေ အသိုက်အဝန်းမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရက်ပ်သီချင်း
စပိန်ဘာသာစကားနဲ့ “Patria Y Vida” (Fatherland or Life) သီချင်းဟာ လက်တင်အမေရိကရဲ့ ၂၀၂၁ အတွင်း အကောင်းဆုံးသီချင်းတပုဒ်အဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဂရမ်မီဆု ချီးမြှင့်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
"This is for my country, for freedom of expression, and for the freedom of the Cubans,"
Photo Credit: Reuters video screenshot
ကျူးဘားတော်လှန်ရေးအသစ်ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ရင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ လာဗီးဂက်စ်မြို့မှာ ဂရမ်မီဆုလက်ခံယူတဲ့ ရက်ပ်ဂီတအဖွဲ့ထဲက အဆိုတော် ဘရူနိုက ဒါဟာ ငါ့နိုင်ငံအတွက်၊​ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက် ကျူးဘားတွေရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လို့ ရင်ခေါင်းသံနဲ့ ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို ရေးဖွဲ့ရာမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျူးဘားမှာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရတဲ့ Maykel Osorbo ရဲ့နာမည်ကို အော်ဟစ်ကြွေးကြော် ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။
ကျူးဘား ရက်ပ်ဂီတ အနုပညာရှင်တွေ စုပေါင်းရေးဖွဲ့ခဲ့ကြတဲ့“Patria Y Vida” သီချင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလက ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ကျူးဘားသာမက တောင်အမေရိက လူငယ်တွေက ထောက်ခံအားပေးလို့ ရေပန်းစားလာတဲ့ ဒီသီချင်းကြောင့်ပဲ သီချင်းရေးဖွဲ့သူတွေထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ Maykel Osorbo ဟာ ကျူးဘားရဲ့ လုံခြုံရေးအတင်းကျပ်ဆုံး Pinar del Río prison အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့မေလကတည်းက အကျဉ်းချခံထားရပြီး မကြာသေးခင်ကပဲ သူဟာ ထောင်တွင်းအစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။​ PEN International က ကမကထပြုတဲ့ နိုင်ငံတကာက အကျဉ်းကျစာရေးဆရာ အနုပညာရှင်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်အတွက် ဒီတနှစ်မှာ အထူးပြုမီးမောင်းထိုးပြီး လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုထဲက အကျဉ်းစံ ၅ ယောက်ထဲမှာ Maykel Osorbo ဟာလည်း တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
Maykel Osorbo နည်းတူ လူထုလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒပြပွဲတွေထဲမှာ အနုပညာရှင်တွေ ဆန္ဒပြလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေ အတော်များများ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသလို ကိုယ့်အိမ်ခန်းကနေ ဘယ်မှထွက်လို့မရအောင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ခံထားရသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကျူးဘားအစိုးရဟာ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကို အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ လူ ၅ ယောက်လောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြလူထု တထောင်ကျော်လောက်ထိ ထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လူသိန်းနဲ့ချီတဲ့ တန်ပြန်ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အစိုးရကစီစဉ်ဖန်တီးခဲ့ပြီး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်တွေ အစိုးရပိတ်ဆို့မှုတွေကို VPN သုံးပြီး ကျော်လွှားခဲ့ကြ လူထုလှုပ်ရှားမှုအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြလို့လည်း အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီး သတင်းမီဒီယာတွေကိုပိတ်ဆို့ရင်း အစိုးရမီဒီယာတွေက ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကိုလှုံ့ဆော်ရင်း နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ့ကာချင်တဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ ကယောင်ကတမ်းတုံ့ပြန်မှုဟာ ကျူးဘားလူငယ်တွေကို အသံတိတ်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
…. Who told you that Cuba is yours?
your time is up, the silence is broken ……
ကျူးဘားကိုမင်းပိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ ကျူးဘားကို ငါတို့လူထုအားလုံးကပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်
မင်းအချိန်ကုန်ဆုံးပြီ။ တိတ်ဆိတ်မှုတွေ ပြိုကွဲသွားပြီ။ စတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ အာဏာရှင် ကျူးဘားအစိုးရကို တိုက်ရိုက် စိန်ခေါ်ထားတဲ့သီချင်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွင်း ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ခံထားရတဲ့ ဖိနှိပ်ခံကျုးဘားလူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်စားပြု တော်လှန်ရေးရက်ပ်ဂီတ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
….(It's over) the laughter is over and the crying is already running
(It's over) and we're not afraid, the deception is over ……..
ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ ရယ်မောချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ။​ အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေကြပြီ။​
ငါတို့မကြောက်ဘူး။ လှည့်ဖျားမှုတွေ တော်လိုက်တော့။​ ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့
တော်လှန်ရေး ရက်ပ်ဂီတဟာ ကျူးဘားရဲ့ တော်လှန်ရေးအသစ်မှာ ထိပ်ဆုံးကနေရာယူ ချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။​
Rhythm and Poetry လို့လဲသိထားကြတဲ့ RAP ဂီတ Hip-Hop လို့လည်း ခေါ်ဆိုလာကြတဲ့ဂီတ အမျိုးအစားဟာ ၁၉၇၀ကျော် ကာလတွေက အာဖရိကန်နွယ်ဖွား အမေရိကန်လူငယ်တွေကြားက ပေါက်ဖွားစတင်လာခဲ့ကြတယ်လို့ သုတေသီတွေက မှတ်သားခဲ့ကြပါတယ်။​ Rhythm စည်းချက်ဝါးချက်နဲ့ Improvise လက်တန်းရွတ်ဆိုမှု စည်းချက်ညီမှုနဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့ဆိုနိုင်မှု လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေ လူငယ်တွေရဲ့ အာခံဖီဆန်ချင်စိတ်တွေနဲ့ သီကုံးရက်ရှယ်ထားတဲ့ဂီတ လမ်းဘေးက အနှိမ်ခံလူတန်းစား ပုန်ကန်ထကြွမှုတွေရဲ့သင်္ကေတတွေနဲ့ ကြွယ်ဝနေတဲ့ ဂီတ။​
လူငယ်ထုကြားကပဲ ပေါက်ပွားလာပြီး ဖရိုဖရဲခေတ်ကာလအပေါ် နာကျည်းမှုတွေ အလိုမကျမှုတွေ အနာဂတ်ကာလအပေါ် တောင့်တမှုတွေနဲ့ ရက်ပ်ဂီတ၊​ လူငယ်ထုနဲ့ တသားတည်း ရပ်တည်ရင်း ဖိနှိပ်သူအစိုးရတသက်လုံး ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေရမယ့် တော်လှန်ရုန်းကြွ ရက်ပ်ဂီတဟာ ဆိုင်ကလုန်း မိုးကြိုးမုန်တိုင်းလို ရင်ခေါင်းသံတွေနဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ဆက်လက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေဦးမှာ သေချာပါတယ်။
“Patria Y Vida” A Protest Anthem : Latin Grammy for song of the year 2021
Artists: Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno
Featured artists: Maykel Osorbo, El Funky
Album: Patria y Vida
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်က စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု
ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ ၆ နယ်မြေ ဒူပလာယာခရိုင်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲက မယ်ထော်သလေး၊ မင်းလက်ပံ၊ အင်ကြင်းမြိုင်၊ လေးကေကော်မြို့သစ် အပါအဝင် ကျေးရွာ ၁၀ ရွာလောက်က ဒေသခံပြည်သူတွေဟာ မေ ၂ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ဘဲဟိကလော်ကျေးရွာက ဘောလုံးကွင်းမှာ စစ်အာဏာရှင်ဆန်ကျင့်ရေး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
Photo - Poe Tar Tu / MPA